ORANGE MADAGASCAR: Feno 10 taona nanohanana ireo tetikasa mampiasa ny fanavaozana ara-tsosialy · déliremadagascar
Manana ny mampiavaka azy ny POESAM 2020. Notanterahina ny 18 jona 2021 teny Ankorondrano ny fizarana ny amboara sy ny loka ho an’ireo tetikasa malagasy mampiasa ny fanavaozana ara-tsosialy mendrika indrindra ka nandray anjara tamin’ny fifaninanana POESAM (Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et Moyen-Orient ), taona 2020. Tetikasa 12 tamin’ireo 40 nandray anjara no voasafidy tamin’ity fifaninanana ity ho an’ny eto an-toerana. Hisolo tena an’i Madagasikara amin’ny fifaninanana eo amin’ny sehatry ny firenena afrikana ireo tetikasa malagasy telo voalohany. Nandrombaka ny loka voalohany ny tetikasa Andao Share. Tetikasa mampifandray ireo mpamatsy vola sy ireo fikambanana manana tetikasa ho fampiroboroboana ny vehivavy, ny tontolo iainana, ny fanabeazana ary ny fampandrosoana an’i Madagasikara izy ity. Ny tetikasa Healthea, mifototra amin’ny fanomezana pasipaoro ara-pahasalamana amin’ny alalan’ny fampiasana ny QR code apetaka amin’ny karatra na “bracelet” sy “plateforme en ligne” no nahazo ny loka faharoa. Natolotra ny tompon’ny tetikasa Mapwess ny loka fahatelo.”Plateforme en ligne” mampifandray ny mpianatra sy ireo oniversite any ivelany amin’ny alalan’ny fampiasana ny teknolojia vaovao izy ity.Ny fanamorana ny fisafidianana ny anjerimanontolo sy dingana arahina no tanjona eto.
Anisany nampiavaka ny POESAM 2020 teto amintsika ny ny fanomezana loka ho an’ny tetikasa mifandraika amin’ny Covid-19. Ny tetikasa Rem’Aide, “application mobile” manampy ny marary amin’ny fitadiavana vaovao momba ny toe-pahasalamany sy manampy ny mpiasan’ny fahasalamana amin’ny fitantanana sy fandrindrana ny asany no nahazo izany loka izany. Ankoatra izany, nisy ihany koa ny loka natokana ho an’ny sokajy vehivavy ka ny tetikasa Alt Soap no nahazo ny amboara. Tetikasa miompana amin’ny famokarana savony ary ho zaraina amin’ireo marefo, indrindra ireo fikambanam-behivavy izy ity. Aorian’izao dia hahazo tohana hampiroboroboana ny tetikasany ireo nahazo loka ireo. Nanatevin-daharana amin’ireo orinasa mpiara-miasa amin’ny Orange Madagasikara hanampy amin’ny fanosehana ireo tetikasa hiroborobo ny EDBM (Economic Development Board of Madagascar).Marihina fa feno 10 taona no nikarakaran’ny Orange Madagascar ity fifaninanana manohana ireo tetikasa mampiasa ny fanavaozana ara-tsosialy ity.